Tuutni JGAO, loqodi (Dialect) Afaan Oromoo hundi wal qixxeedha jennee amanna – Kichuu
HomeAfaan OromooTuutni JGAO, loqodi (Dialect) Afaan Oromoo hundi wal qixxeedha jennee amanna
Ejjennoo tuuta #JGAO_GAOP : Tuutni JGAO, loqodi (Dialect) Afaan Oromoo hundi wal qixxeedha jennee amanna.
Loqodni tokko isa tokko wanti inni ittiin caaluu qabu hin jiru, jiraachuus hin qabu, caaluus hin qabu!!! Yoo kanaan dura akkasitti hubatamaa tureera ta’e, kun yaada dogoggoraati jennee amanna.
Loqodi Oromoo heddummaachuun waan Oromoon tokko ittiin boonuudha jennee amanna malee kan ittiin qaana’an miti. Warri kanatti hin amanne yoo jiraatan, warra diqaalaa nafxanyootaa yookaan goobantoota Oromoo Afaan Oromoo xiqqeessuuf diinaa wajjin hojjetaniidha.
Oromoon sammuu Oromummaa qofaan yaadu kana fudhatee ittiin boonuutu irra jiraata malee Loqodi naannoo tokkoo isa tokko caaluu qaba, yookaan anatu kankee sii beeka jechuun yeroo ammaa kanatti hin hojjetu!
Dhalooti ammaa (Qubee Generation) akkasumas gorsa abbootii keenyaa, hayyoota keenyaa, dhaggeeffannee afaan keenya addunyaatti beeksisuuf hojjenna malee yeroo teenyee warroota (Losers) uummata kasaaraadhaan joonja’aa jiruu wajjin morkii keessa gallu hin jiru, expire godheera wanti akkasii.
Namooti wal-qixxummaan saba Oromoo iddoo hundaa hin liqimfamneef kun rakkoo addaa addaa qabaachuu malu, rakkoo dinagdee isaan mudatu dabalatee. Yoo JGAO milkaawee loqoda hunda walitti funaanee jechoota bade awwaalaa baasee afaansaa guddise, bu’aa isaaniitu itti xiqqaata. Kanaaf hojii JGAO tuffachuu (undermine) gochuuf ganamaa galgala maraataa warri jiran ammallee si’achi maraatuuf jiru. Gonkumaa hin milkaawan, daran qaana’anii salphatu malee.
Ibsa bal’aa fi (update) obbo Hamza Wariyo isiniif dhiyeessa.
Professor of Linguistics, Amanuel Raga, Gaaffii afaaniif barbaachisummaa loqodaa hunda deebisa
Saphaloo Kadiir loqodi maaliif akka wal qixxeetti ilaalamuu qaburratti ibsa kenna
Gaazexessaa Daniel Bariisoo Areerii akka expert loqoda Gujiitti deebii barbaachisummaa fi walqixxummaa loqodaa kenna
መድረክ ውይይቱን ማቋረጡን በማስመልከት ጋዜጣዊ መግለጫ በመስጠት ላይ: